အင်းလေးကန်တိမ်ကောမှုကြောင့် ကွယ်ပျောက်သွားသည့် ရေပေါ်ဈေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်မည် | ❃ Tachileik News Agency ❃ www.tachileik.net
အင်းလေးကန်တိမ်ကောမှုကြောင့် ကွယ်ပျောက်သွားသည့် ရေပေါ်ဈေး ပြန်လည်ဖော်ဆောင်မည်
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ အင်းလေးဒေသ ဟဲယာရွာမရှိ ရေပေါ်ဈေးနေရာမှာ ကုန်းမြေဖြစ်သွားသဖြင့် အင်းလေးရေပေါ်ဈေးတစ်ခုအား အင်းပေါခုံရွာတွင် ပြန်လည်ဖော်ဆောင်သွားရန် လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အင်းလေးတောင်သူလယ်သမားအဖွဲ့ထံမှ သိရသည်။
“ ဒီနှစ်ထဲမှာ လုပ်ဖို့အတွက် ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားဝန်ကြီး ကိုလည်းတင်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ လက်မှု ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချရေး ကော်မတီကိုလည်း ပြောထားတယ်။ ဒီလိုလုပ်ရင်လည်း ဘတ်ဂျက်တွေ လိုလာမယ်။ ရွာသူရွာသားတွေလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်လာပြီး ဈေးတစ်ခု ပေါ်ထွက်လာအောင် ပံ့ပိုးကူညီနိုင်ဖို့တွေကိုလည်း တင်ပြထားတယ်။ အင်းလေးမှာက ရေပေါ်ဈေးဆိုတာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ နိုင်ငံခြားသားတွေ စိတ်ဝင်စားမယ့် နေရာလေးရှိရင် ပိုကောင်းပါတယ်” ဟု အင်းလေးတောင်သူလယ်သမားများအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးခင်မောင်လတ်က ပြောသည်။
ယခင်က ဟဲယာရွာမရှိ ရေပေါ်ဈေးသည် လှေများဖြင့် ရောင်းချဝယ်ယူသည့်ဈေးအဖြစ် နာမည်ကျော်လှသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့် (၇)နှစ်ခန့်မှစ၍ အဆိုပါ ဈေးနေရာမှာ ကောလာပြီး ကုန်းပေါ်ဈေးအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ ရေပေါ်ဈေးနေရာ ဟဲယာရွာမမှာက ရေခန်းတာကို အများဆုံးကြုံရတာ။ နုံးတူးတာတွေလုပ်ပေမယ့် ရေခန်းတာကတော့ ကြုံနေရတုန်းပဲ။ ရေပေါ်ဈေးနေရာကတော့ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ ဆိုင်တန်းတွေနဲ့ မြေပေါ်ဈေးဖြစ်နေပါပြီ”ဟု တောင်ကြီးမြို့မှ ဒေသခံ ဦးတင်မောင်တိုးက ပြောသည်။
ရေပေါ်ဈေးအသစ်တွင် ဒေသထွက်အသီးအနှံများရောင်းချရန် စီစဉ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရန် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Photo. Save the inle lake ဦးခင်​​မောင်​လတ်​
အငျးလေးကနျတိမျကောမှုကွောငျ့ ကှယျပြောကျသှားသညျ့ ရပေျေါဈေး ပွနျလညျဖျောဆောငျမညျ
ရှမျးပွညျနယျ(တောငျပိုငျး)၊ ညောငျရှမွေို့နယျ၊ အငျးလေးဒသေ ဟဲယာရှာမရှိ ရပေျေါဈေးနရောမှာ ကုနျးမွဖွဈေသှားသဖွငျ့ အငျးလေးရပေျေါဈေးတဈခုအား အငျးပေါခုံရှာတှငျ ပွနျလညျဖျောဆောငျသှားရနျ လုပျဆောငျနကွေောငျး အငျးလေးတောငျသူလယျသမားအဖှဲ့ထံမှ သိရသညျ။
“ ဒီနှဈထဲမှာ လုပျဖို့အတှကျ ဟိုတယျနှငျ့ ခရီးသှားဝနျကွီး ကိုလညျးတငျပွထားပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံ လကျမှု ပစ်စညျး ထုတျလုပျရောငျးခရြေး ကျောမတီကိုလညျး ပွောထားတယျ။ ဒီလိုလုပျရငျလညျး ဘတျဂကျြတှေ လိုလာမယျ။ ရှာသူရှာသားတှလေညျး ပူးပေါငျး ပါဝငျလာပွီး ဈေးတဈခု ပျေါထှကျလာအောငျ ပံ့ပိုးကူညီနိုငျဖို့တှကေိုလညျး တငျပွထားတယျ။ အငျးလေးမှာက ရပေျေါဈေးဆိုတာ ရှိသငျ့ပါတယျ။ ခရီးသှားလုပျငနျးတဈခုမှာ နိုငျငံခွားသားတှေ စိတျဝငျစားမယျ့ နရောလေးရှိရငျ ပိုကောငျးပါတယျ” ဟု အငျးလေးတောငျသူလယျသမားမြားအဖှဲ့ အတှငျးရေးမှူး ဦးခငျမောငျလတျက ပွောသညျ။
ယခငျက ဟဲယာရှာမရှိ ရပေျေါဈေးသညျ လှမြေားဖွငျ့ ရောငျးခဝြယျယူသညျ့ဈေးအဖွဈ နာမညျကြျောလှသျောလညျး လှနျခဲ့သညျ့ (၇)နှဈခနျ့မှစ၍ အဆိုပါ ဈေးနရောမှာ ကောလာပွီး ကုနျးပျေါဈေးအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
“ ရပေျေါဈေးနရော ဟဲယာရှာမမှာက ရခေနျးတာကို အမြားဆုံးကွုံရတာ။ နုံးတူးတာတှလေုပျပမေယျ့ ရခေနျးတာကတော့ ကွုံနရေတုနျးပဲ။ ရပေျေါဈေးနရောကတော့ အမှတျတရပစ်စညျးတှရေောငျးတဲ့ ဆိုငျတနျးတှနေဲ့ မွပေျေါဈေးဖွဈနပေါပွီ”ဟု တောငျကွီးမွို့မှ ဒသေခံ ဦးတငျမောငျတိုးက ပွောသညျ။
ရပေျေါဈေးအသဈတှငျ ဒသေထှကျအသီးအနှံမြားရောငျးခရြနျ စီစဉျသှားမညျဖွဈပွီး ၂၀၁၇ ခုနှဈအတှငျး အကောငျအထညျဖျောရနျ လုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Photo. Save the inle lake ဦးခငျ​​မောငျ​လတျ